Mitambo mishanu yatinogona kutamba pasina kuvhura iyo iPhone | IPhone nhau
Kunyangwe muApp Store tinogara tichiwana mitambo yakafanana muchikamu chemitambo yakanyanya kudhanilodwa, kana tikatsvaga zvishoma tinogona kuwana nhamba hombe yemitambo, mapuratifomu, zvivharo, mibvunzo, zano, mujaho ... Asi isu tinogona zvakare tsvaga nhamba hombe ye mitambo inotibvumidza kuti titambe kubva ku lock screen ye iPhone yedu.
Iyi mitambo, ine mashandiro uye kutamba zviri nyore kwazvo, asi seFlappy Shiri vanogona kutiita kuti tisungirire kwemaawa mashoma sekunge waive mutambo wechivanhu. MuActualidad iPhone isu takatarisa kuApp Store yatinokuratidza mitambo mishanu yepamusoro inoenderana nenzvimbo yekuzivisa.
1 Mitambo mishanu yekunakirwa kubva kuZiviso Center
1.1 Steve - Iyo Inosvetuka Dinosaur
1.2 Zvinokurumidza Nyoka
Mitambo mishanu yekunakirwa kubva kuZiviso Center
Kuti tinakirwe nemitambo iyi, isu tinongofanirwa kutsvedza Notification Center kuti titange kutamba.
Steve - Iyo Inosvetuka Dinosaur
Isu tinotanga naSteve, dinosaur inosvetuka, nekuti anovandudza uyu mutambo, Ivan de Cabo, Spanish. Steve inowanikwa kurodha mahara paApp Store. Iyo ine ye-mukati yekutenga iyo inotibvumidza isu kushandisa vamwe vatambi mumutambo: Zvi, Spark, Alex, Leo naRalph, mukuwedzera pakuwedzera ruvara kumutambo. Kana iwe ukashandisa iyo Chrome browser, uyu mutambo unozonzwika wakajairika kwauri.
Kana iwe uine chero yekutanga Nokia mafoni akarova pamusika, zvirokwazvo iwe wakanakidzwa nenyoka mutambo, iwo uyo wakatiita isu kurasikirwa maawa nemaawa nefoni yedu mbozha. Zvikurumidze Nyoka inotipa mukana wekurangarira nguva idzodzo kubva kuNotification Center yedu.
Semutambo wakagadzirirwa Notification Center, Helicopter Widget haina chekuita nemitambo yechinyakare yeherikoputa, asi zvinotibvumidza kunakidzwa neiyi mini-mutambo kwechinguva kwatinofanira kubhururuka helikopta.
TicTacToe ndiyo yakajairwa tic-tac-chigunwe mutambo, uyo watinogona kutamba tisingatombofanira kuvhura yedu iPhone chero nguva.
Semitambo yapfuura, Minesweeper ndiyo diki diki yekumigodhi yave ichiwanikwa paWindows kwemakore mazhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mitambo mishanu yatinogona kutamba tisina kuvhura iyo iPhone
Zvinoshamisa pfungwa idzo vanogadzira vanofanirwa kushandisa chero chinhu cheIOS basa haha ​​ini ndinoifarira, nzira yakanaka yekutamba semuenzaniso kana uchifamba nepasi pevhu 😀